बाबुराम भट्टराई भन्छन् : सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको क्षमताले नै भ्याउँदैन
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी क्षेत्रले सडक पूर्वाधरमा लगानी गर्न नसक्ने बताएका छन् । राजधानीमा बुधबारबाट सुरु भएको पूर्वाधार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सडक, शहरी पूर्वाधार लगायतमा नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता नै नपुग्ने दाबी गरेका हुन् । साथै, उनले निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त क्षेत्र उर्जा रहेको समेत उनले बताए । निर्यतसमेत गर्न सकिने भएकाले उर्जामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सडकमा उद्यमीले लगानी गर्नै नहुने दाबी गरे । उनले भने ‘निजी क्षेत्रको धर्म मुनाफा कमाउने हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर रोजगारी सिर्जना गराउने हो । नाफाबाट अधिक राजस्व संकलन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने हो ।’ सडक तथा यातायातको क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणमा राज्यले नै लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यतिहुँदा हुँदाहुँदै पनि उनले काठमाडौं–तराई र मधेस द्रुतमार्ग र बाराको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणमा भने लगानीका लागि पहल गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
डा. भट्टराईले कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट भारत र चीनलाई जोड्ने सडक बनाउन पनि सुझाब दिए । काठमाडौंले अब जनसंख्या नधान्ने भन्दै काठमाडौं र मधेसलाई जोड्न सुझाव दिएका हुन् । अहिले पनि जीडीपीको २८% निर्वाह कृषि क्षेत्रमा रहेको बताउँदै पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार सम्मेलन सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका हुन् । यो सम्मेलन बिहीबारसम्म चल्नेछ । यसमा निजी क्षेत्रले विभिन्न ५४ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्नेछन् ।